Hemolytic-Uremic Syndrome (ပျက်စီးသွေးနီဥများကြောင့် ကျောက်ကပ်ထိခိုက်သော ရောဂါ ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Hemolytic-Uremic Syndrome (ပျက်စီးသွေးနီဥများကြောင့် ကျောက်ကပ်ထိခိုက်သော ရောဂါ )
Hemolytic-Uremic Syndrome (ပျက်စီးသွေးနီဥများကြောင့် ကျောက်ကပ်ထိခိုက်သော ရောဂါ ) ကဘာလဲ။
Hemolytic-uremic syndrome (HUS) ဆိုသည်မှာ အ စာခြေစနစ်တွင် ရောဂါပိုးကူးစက်ခြင်းကသွေးနီဥများကိုပျက် စီးစေသောအဆိပ်အတောက် ပစ္စည်းများကိုထုတ်လွတ်သောအခါ ဖြစ်ပွားသောရောဂါတစ်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။
ထိုရောဂါ စတင် ဖြစ်ပွားပါကပျက်စီးသွားသောသွေးနီဥများသည် ကျောက်ကပ်ရှိ စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်ကိုစတင်ပိတ်ဆို့ပြီးအသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရသော HUS နှင့်ဆိုင်သောကျောက် ကပ်ပျက်စီးမှု ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
HUS သည် ပြင်းထန်သောရောဂါတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းအချိန်မီသင့်တော်သောကုသမှု ခံယူပါကလူတော်တော်များများတွင် အပြည့်ပြန်လည် ကောင်းမွန် လာနိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ငယ်ရွယ်သောကလေးများတွင် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
Hemolytic-Uremic Syndrome (ပျက်စီးသွေးနီဥများကြောင့် ကျောက်ကပ်ထိခိုက်သော ရောဂါ ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
HUS သည်လူတိုင်းတွင် ဖြစ်နိုင်သော်လည်း အသက်၄နှစ် အောက် ကလေးများတွင် ပို၍ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အန္တရာယ်ဖြစ် စေသောအချက်များကိုလျော့ချခြင်းအားဖြင့် ရောဂါရခြင်းကိုနည်းအောင်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ပိုမိုသောအချက်အလက် များအတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Hemolytic-Uremic Syndrome (ပျက်စီးသွေးနီဥများကြောင့် ကျောက်ကပ်ထိခိုက်သော ရောဂါ ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
Hemolytic-uremic syndrome၏ အဖြစ်များသောရောဂါ လက္ခဏာများမှာအဖျားတက်ခြင်း၊ ပျို့တက်ခြင်း၊ အော့အန် ခြင်း၊ ဝမ်းဗိုက်တွင်နာကျင်ခြင်း နှင့် သွေးပေါင်တက်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။ ဆီးသွားနည်းခြင်းဆီးမသွားခြင်း နှင့် အနီရောင် ဆီးများသွားခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။
သင် သို့မဟုတ် သင့်ကလေးတွင် ရှင်းမပြနိုင်သောအညို မဲစွဲခြင်း၊ ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲသွေးထွက်ခြင်း၊ ခြေလက်များဖောယောင်ခြင်း၊ အလွန် မောပန်းခြင်း နှင့် ဆီးသွားမှုနည်းခြင်း နှင့် ရက်အတန်ကြာဝမ်းလျှောခြင်းတို့ဖြစ်ပါကဆရာဝန်နှင့် အမြန် ပြသပါ။ သင် သို့မဟုတ် သင့်ကလေးသည် ၁၂နာရီကျော် ကြာသည်အထိဆီးမသွားပါကအရေးပေါ် စောင့်ရှောက်မှု ရှာဖွေခံယူပါ။
Hemolytic-Uremic Syndrome (ပျက်စီးသွေးနီဥများကြောင့် ကျောက်ကပ်ထိခိုက်သော ရောဂါ ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အဖြစ်များသောအကြောင်းရင်းမှာ VTEC ( verocyte-oxin-producing Escherichia coli) ဟုခေါ်သောဘတ်တီးရီးယားတစ်မျိုးကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်းတစ်ခါ တစ်ရံအခြားအစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းရောဂါပိုးကူးစက် မှုကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ထို့အပြင် ဓါတုကုထုံး၊ ကိုယ် ခံအားကျစေသော cyclosporine ဆေး၊ Quiineကဲ့သို့ ဆေးများသို့မဟုတ် ဆေးကုသမှုအချို့ ခံယူထားသူများသည် လည်း HUS ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
Hemolytic-Uremic Syndrome (ပျက်စီးသွေးနီဥများကြောင့် ကျောက်ကပ်ထိခိုက်သော ရောဂါ ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Hemolytic-uremic syndrome ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသောအချက်များမှာ-
ပို၍ရောဂါကူးစက်နိုင်လွယ်အောင် ပြုလုပ်ပေးသောမျိုးဗီဇပြောင်းလဲမှု ရှိသူများ
ကလေးငယ်များနှင့် အသက်ကြီးသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူများသည် HUS ကြောင့် အပြင်းအထန်ဖျားနာနိုင်ပါသည်။
Hemolytic-Uremic Syndrome (ပျက်စီးသွေးနီဥများကြောင့် ကျောက်ကပ်ထိခိုက်သော ရောဂါ ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူသည် သေချာစွာ ကြည့်ရှု စစ်ဆေးပြီးဆေးမှတ်တမ်းယူခြင်းဖြင့် ရောဂါအဖြေရှာ နိုင်ပါ သည်။ သွေးနှင့် ဆီးနမူနာများစစ်ခြင်း၊ ဝမ်းစစ်ခြင်းတို့ကိုလည်းပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူသည် ကျောက်ကပ်ပျက်စီးမှုကိုစစ်ဆေးရန် Ultrasonography ရိုက်ခြင်းကိုညွှန်ကြားနိုင်ပါသည်။ ထိုမနာကျင်စေသောစစ် ဆေးမှုသည် အသံလှိုင်းများကိုအသုံးပြုကာကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ များကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ အခြားကျောက်ကပ်စစ်ဆေးမှု များကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Hemolytic-Uremic Syndrome (ပျက်စီးသွေးနီဥများကြောင့် ကျောက်ကပ်ထိခိုက်သော ရောဂါ ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
HUS အတွက် ကုသမှုများမှာ-
သွေးနီဥများနှင့် platelet များသွင်းခြင်း
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများအသုံးပြုခြင်းသည် Hemolytic-uremic syndromeကိုကုသရာတွင် ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ပါ လူနေမှုပုံစံများ နှင့် အိမ်သုံးကုထုံးများသည် Hemolytic-uremic syndrome ကိုထိန်းချုပ်နိုင် ပါသည်။
လက်ဆေးပါ။ မျက်နှာသုတ်ပုဝါ နှင့် အစားအစာအဖုံးများကိုဆေးကြောပါ။
မကျက်တကျက်ချက်ထားသောအသားများမစားပါ နှင့်။ အထူးသဖြင့် အမဲသားဖြစ်သည်။ အသားများကိုအတွင်းအပူချိန် ၁၅၅ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် နှင့် အထက် တွင် ချက်ပြုတ်သင့်ပါသည်။
အသီးများဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုရေဖြင့်လောင်း ၍ ဆေးကြောပါ။
ပူနွေးအောင် လုပ်မထားသော နွားနို့၊ အချိုရည် နှင့် ပန်းသီးသေရည်များကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။
Ferri, Fred. Ferri’s Netter Patient Advisor.Philadelphia, PA: Saunders / Elsevier, 2012.
Hemolytic-UremicSyndrome.http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hemolytic-uremic-syndrome/basics/definition/con- 20029487.September 24, 2015.
Hemolytic-Uremic Syndrome.https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000510.htm. September 24,2015.Ferri, Fred. Ferri’s Netter Patient Advisor.Philadelphia, PA: Saunders / Elsevier, 2012.
Hemolytic-UremicSyndrome. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hemolytic-uremic-syndrome/basics/definition/con- 20029487.September 24, 2015.
Hemolytic-Uremic Syndrome.https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000510.htm. September 24,2015.